Aostraliana Mihitsoka an’arivony maro no tezitra noho ny fanitarana ny fepetra famerana ny sisintany · Global Voices teny Malagasy
Hihatra manomboka 11 Aogositra ny fepetra vaovao amin'ny fiampitana sisintany
Voadika ny 12 Aogositra 2021 5:13 GMT
Efitrano fiaingana ao amin'ny seranam-piaramanidina Sydney. Sary avy amin'ny Jnpet, Wikimedia Commons. (CC BY-SA 3.0)
Vao haingana ny governemanta federaly Aostraliana no nanitatra ny famerana ny sisintany. Hatramin'izao, na dia mbola ao anatin'ny fepetra COVID henjana aza, dia afaka miala sy miverina any Aostralia ny olom-pirenena Aostraliana izay mipetraka ara-dalàna any ivelany. Hanakana ireo Aostraliana olon-tsotra mipetraka any ivelany hiala an'i Aostralia kosa ity fihitaran'ny famerana ity raha hiverina izy ireo. Natao izany hanakanana ny Aostraliana any ivelany tsy hody an-tanindrazana ary mba hamerana ny fampiasana ireo toerana fanokana-toerana ho an'ny mpandeha. Nambara tamin'ny 1 Aogositra ary hanan-kery amin'ny 11 Aogositra ny fepetra vaovao.
Nampihatra ny fanidiana ny sisintany henjana indrindra eto amin'izao tontolo izao i Aostralia hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina COVID-19. Natomboka tamin'ny volana Martsa 2020 ny fandraràna ny zotra iraisampirenena ary midika izany fa tsy afaka mivoaka ny firenena ny olom-pirenena, ny mponina maharitra, ary eny fa na dia ny olom-pirenena mizaka zom-pirenena roa aza raha tsy misy alàlana avy amin'ny governemanta.
Na izany aza, nandrehitra ny hatezeran'ny Aostraliana miisa 35.000 eo ho eo izay raikitra any ivelany anefa maniry hody ny famerana-fandraràna farany indrindra. Nanomboka ny volana Martsa 2020, tantaram-baovao marobe no nanasongadina ny fahasahiranan'ireo Aostraliana kivy tafahitsoka any ivelany, tsy afaka mody any an-tanindrazana. Ny famerana henjana amin'ny isan'ireo mpandeha, ny halafosan'ny saran'ny sidina miverina, ary ny lisitra lava mbola miandry no anisan'ireo antony hitan'ireo any ivelany fa tsy ahafahan'izy ireo miverina.
Betsaka amin'ireo olom-pirenena ireo no mitsikera ny fizirizirian'ny governemanta ho fanitsakitsahana ny zon'izy ireo fototra. Milaza ny Fifanekena Iraisam-pirenena momba ny Zo Sivily sy Politika fa “tsy tokony hisy olona tsy hanan-jo amin'ny fahazoana alalana hiditra ao amin'ny fireneny.” Na eo aza izany dia tsy niova hevitra tamin'ny fanapahan-keviny momba ny sisintany izay mampiady hevitra ny governemanta Aostraliana.
Nanjary toerana iray nanehoan'ny Aostraliana ny fahasosorany ny sehatry ny tambajotra sosialy amin'ny tenirohy toy ny [Aostraliana Mihitsoka] nalaza ny fiandohan'ny volana Aogositra. Nanome toerana ho an'ny olona hivory sy hizara ny tantarany ny kaonty Instagram vaovao toa ny @safelyreuniteaustralia sy @aussieswithsigns. Nampiasa horonantsary Tiktok ihany koa ireo Aostraliana sosotra hizarana ny fomba fijerin'izy ireo amin'ny mpanaraka maro kokoa.
Efa dimy taona izay no teto aho sy ny fofombadiko. Efa 2 taona izao no tsy nihaonanay tamin'ny fianakaviana. Maty ireo raibenay, tsy afaka nanatrika ny fandevenana izahay. Very saina ny renibeko. Vao avy sitrana tamin'ny homamiadan'ny tatavia ny reniko ary vao haingana izahay no afa-jaza sady manana olana amin'ny tsy fahafaha-miteraka. Ny hahita ny fianakavianay manohana anay no ilainay. Mahatsapa ho voafandrika amin'ity nofy ratsy ity izahay. Tsy noeritrertiko mihitsy hoe rehefa hifindra any Aostralia izahay dia tsy ho afaka ny hahita ny fianakavianay.
Betsaka no mitaraina fa tsy afaka mitsidika olona marary na maty ao amin'ny fianakaviana izy ireo noho ny famerana:
Ity ny reniko 5 taona lasa izay niaraka tamin'ny zanako lahy voalohany. Efa tratran'ny Alzheimer dingana farany izy izao tao anatin'ny fotoana fohy. Saingy midika ny rafitry napetraky ny @ ScottMorrisonMP amin'ny fanokana-toerana fa tsy afaka mahita azy aho hatramin'ny nanombohan'ny valanaretina…
Ny sasany kosa matahotra fotsiny ny hitohizan'ny fanidiana ny sisintany, tsy misy tanjona mazava:
Ny atahorako indrindra?
– Rava ny tontolo iainana
– Havana maty alohan'ny hodiako
– Maty irery any amin'ny tanin'ny vahiny
Betsaka no tezitra satria navelan'ny governemanta hiditra ao amin'ny firenena ny olo-malaza sy ny atleta, raha tafahitsoka kosa ny olon-tsotra:
“At some point we must ask ourselves, if there are 🇦🇺 children sleeping on airport floors, families living in caravans off charity, people with months left to live, continuously being kicked off flights, while Zac Efron relocates to Byron for the lifestyle- what have we become?👇🏻
“Amin'ny fotoana sasany dia tsy maintsy manontany tena isika hoe misy ve ny ankizy 🇦🇺 matory ao amin'ny gorodon'ny seranam-piaramanidina, misy ve ny fianakaviana mipetraka amin'ny karavana tsy misy fiantrana, misy ve ny olona amam-bolana sisa no hivelomany, ​​kanefa lavina hatrany amin'ny sidina, raha kosa nifindra ho any Byron ho any amin'ny fiainana vaovao i Zac Efron . mankaiza isika? 👇🏻
Tsy azonao inoana loatra fa mahatsapa firaisankina na fiarahana ny #aostraliamihitsoka noho izahay nilaozana. Sidina miisa 7 no nofoanana raha nikasa ny hamihina farany ny reniko narary efa ho faty aho, saingy aleon'ny fireneko mamela ireo olo-malaza sy kintan'ny fanatanjahan-tena hiditra toy izay izaho.
Tsy mbola nahatsapa ho tavela amin'ity “firaisankina miaraka” ity.
Ny sasany miresaka mivantana amin'ireo mpitarika politika Aostraliana, mangataka fanovana.
Tsy mampino … Nanapa-kevitra ny @GregHuntMP hampitombo indroa ny manda Aostralia, ny Fandrarana Sidina mba ho fanohanana izay tsy ho tonga amin'izao toerana izao raha toa ka nanana politika mahomby izy ireo tamin'ny voalohany!
Tsy “mpandeha” na mpanao fialan-tsasatra FFS izahay !!!
Nanambara ny angona vao haingana fa Aostraliana 50 mahery monina any ivelany no matin'ny COVID-19 hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina. Maro tamin'ireo maty no nisoratra anarana tao amin'ny Departemantan'ny Raharaham-bahiny noho ny fangatahan'izy ireo fanampiana amin'ny fodiana ary vao mainka niteraka hatezerana bebe kokoa teo amin'ny vondrom-piarahamonina mpivahiny an-tserasera izany.
Ny fanaraha-maso henjana ny sisintany nataon'i Aostralia ihany koa dia nahatonga ny olom-pirenena roa tany ivelany hanao fanangonan-tsonia ho an'ny ONU hanoherana ny governemanta hitakiana ny zon'izy ireo hody tamin'ny volana Marsa 2021, izay nilaza fa fanitsakitsahana ny zon'olombelona fototra ny fandraràna ny fivezivezena.
Nanazava ny antony nanovan'ny governemanta ny fepetra famerana ny sisintany farany teo ny Minisitry ny Fahasalamana Aostraliana, Greg Hunt : “Hampihena ny tsindry amin'ny fahafahan'i Aostralia manoka-toerana ireo mpandeha, hampihena ny mety ho fifindran'ny COVID-19 amin'ny vahoaka Aostraliana, ary hanampy amin'ny famerenana ireo Aostraliana marefo hody an-tanindrazana ny fanitsiana.”
Ho an'ireo Aostraliana an'arivony mbola mikasa hody any an-tanindrazany, milaza ny lalàna tamin'ity volana Aogositra ity fa tsy hihamora izany atsy ho atsy.